paoma Archives - SmartMe
Archives tag: paoma
Dom » Entries tagged with "apple"
Apple Watch Series 8 dia handrefy ny haavon'ny alikaola ra?
paoma, apple watch, famantaranandro marani-tsaina, manan-tsaina fiambenana
Ny asa ara-pahasalamana dia lasa singa tena ilaina amin'ny famantaranandro sy tarika marani-tsaina rehetra. Toa ny fitaovana farany an'ny Apple Watch no hasiana fitaovana sensor revolisionera. Raha ny hita, Apple dia iray amin'ireo mpanjifa manan-danja ...
Hahafantatra ny feon'ilay mpisandoka ve Siri tsy ho ela?
paoma, patanty, paoma am-paty, foza
Araka ny notaterin'i Patently Apple, ilay goavambe avy any Cupertino dia miasa amin'ny fanatsarana tena lehibe ny mpanampy ny feony. Siri dia mety hianatra tsy hiraharaha ny feon'ny mpisandoka ho avy tsy ho ela. Efa nahafantatra ny feon'ny mpampiasa i Siri mpanampy ny feo, noho ny ...
Apple Glass miaraka amin'ny teknolojia Thermal Touch?
paoma, fitaratra paoma, solomaso marani-tsaina, metaio, patanty, fikasihana mafana
Ny patanty nambara vao haingana dia mampiseho ny fomba ahafahan'i Apple mampifangaro ny zava-misy mitombo amin'ny teknolojia mafana. Misaotra an'io, ny vahaolana tsy mahazatra sasany dia ho azo ampiharina amin'ny solomaso antsoina hoe Apple Glass. Mihamaro hatrany ny tombantombana momba ...